Wax kasta oo ay tahay inaad ka ogaatid waxyaabaha ku saabsan Pregabalin - Buyaas
Pregabalin (148553-50-8) waa daawo inta badan lagu iibiyo magaca astaanta u ah 'Lyrica' ee gobollada kala duwan ee adduunka. Waa daawo ka hortaga suuxdinta oo sidoo kale loo yaqaan 'anticonvulsant'. Daawada waxaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo waxyaabaha maskaxda ku dhaca ee sababa suuxdinta. Dhanka kale, Pregabalin waxay wax yeelaysaa kiimikooyinka maskaxda ee u dirta calaamadaha xanuunka dhammaan dareemayaasha jirka. Daawada waxaa sidoo kale loo isticmaalaa adduunka caafimaadka in lagu daaweeyo xanuunno kala duwan oo ay sababaan cudurro kala duwan sida xannuunka dareemayaasha ee ay sababaan fibromyalgia, sonkorowga, iyo xitaa xanuunnada laf-dhabarka.
Pregabalin (148553-50-8) waxaa loo istcimaali karaa daawooyinka kale si looga caawiyo daaweynta suuxdinta bilowga ah ee carruurta ugu yaraan afar sano jirka ah iyo dadka waaweynba. Sanado badan, hadda dawadu waxay door muhiim ah ka ciyaartay caafimaadka adduunka, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah dawooyinka xanuunka yareeya ee suuqa ka jira. Daawada waa in lagu qaataa oo keliya warqad dhakhtar oo loo qoro si natiijooyin wanaagsan loo helo. Si kastaba ha noqotee, had iyo jeer iska hubi inaad ka heleyso Pregabalin iibiyaha la isku halleyn karo ama soo-saare ku xeeran.
Dalka Mareykanka, Pregabalin waxaa loo oggolaaday in lagu isticmaalo daaweynta cudurrada sida;
Halkan, qiyaasta bilowga ah ee Pregabalin waa 165mg oo ay tahay in la qaato hal mar maalintii, waxaana lagugula talinayaa inaad qaadato kadib cuntada fiidkii. Waxa kale oo jira suurtogalnimada in qiyaasta loo kordhiyo ilaa 330mg usbuuca ugu horreeya ee wareegga qiyaasta daawada. Laba ama toddobaadyo daawo qaadasho ah mana jiro wax horumar ah oo la taaban karo ee xanuunka ka dib dhakhtarkaagu wuxuu kor u qaadi karaa qiyaasta ugu badan ee ah 660mgs maalintii. Markaad beddelato qiyaasta qaadashada, qaado subaxda mid si degdeg ah looga sii daayo ka dibna bilow dawada sii-deynta sii-socda ka dib markaad qaadato cuntadaada fiidkii.
Halkan qiyaasta bilowga ah waa 75mg laba jeer maalintii waxaana lagu hagaajin karaa 150mg laba jeer maalintiiba toddobaadka koowaad ee qiyaasta qaadashada. Qiyaasta ayaa sidoo kale loogu sii kordhin karaa 225mg si loo qaato laba jeer maalintii. Qiyaasta ugu badan ee fibromyalgia waa 450mgs iyo qiyaasta dayactirka ee qiyaastii ah 300mg ilaa 450mg. Dhanka kale, daraasado ayaa muujinaya in qaadashada 600mgs maalin kasta aysan bixinaynin wax dheeri ah oo Pregabalin ah laakiin ay ka dhalan karto waxyeelo daran.
Maalmaha ugu horeeya ee qiyaasta qaadashada waxay siineysaa dhaqtarkaaga fursad uu ku qiimeeyo horumarkaaga ka hor inta uusan go’aansan in la isku habeeyo qiyaasta hoos ama kor. Daraasadaha ayaa muujinaya inaad filayso natiijooyinka maalmaha ugu horreeya ee qiyaasta qaadashada. Pregabalin waa daawo dhakhso u hawlgasha, sidaa darteedna, waa inaad filan kartaa in xanuunku kaa bogsado maalmaha hore ee qaadashada daawada. Haddii ay dhacdo in aadan la kulmin wax isbeddel ah toddobaadka ugu horreeya ee qaadashada qaadashadaada, u sheeg dhakhtarkaaga si uu ula qabsado qiyaasta daawada si ka wanaagsan natiijooyinka. Jirka aadanaha wuu kala duwan yahay, isla markaana maahan wax iska caadi ah inaad natiijada u hesho sida ugu dhakhsaha badan dadka kale. Sidoo kale waxay kuxirantahay xaalada aad dawada uhayso, natiijooyinka way kala duwanaan doonaan. Qaar ka mid ah kuwa caadiga ah Natiijooyinka pregabalin waxaa ka mid ah;
Sirta ku jirta natiijooyinka Tayada tayada leh ee loo yaqaan 'Pregabalin' waa inay ku lug yeelato dhakhtarkaaga geedi socodka qaadashada oo dhan. Ha habeynin qiyaasta Pregabalin adigoon u sheegin dawadaada. In alla inta aad si fudud uga iibsan karto dawada dukaamada kaladuwan ee internetka, ha bilaabin qaadashada baaritaan caafimaad la'aan. Dawadani waxay awood u yeelatay yareynta xanuunnada ay sababaan sababo kala duwan. Ciyaartoyda qaar waxay sidoo kale u isticmaalaan Pregabalin si ay u maareeyaan xanuunnada muruqyada, iyo xanuunnada ku dhaca laf-dhabarka, kuwaas oo caan ku ah jimicsiga degdega ah iyo tartamada.
6.Nolosha nuska ah ee Pregabalin
Kani waa dawo dhakhso u shaqeysa oo firfircoon Nolosha nuska ah ee Pregabalin ee saacadaha 6. Sidaa darteed, si loo helo natiijooyinka wanaagsan ee Pregabalin, qiyaasta daawada waa in loo qaybiyaa laba ama saddex maalintii. Ahaanshaha daroogo afka ah, ayay kuu fududeyneysaa inaad natiijooyin hesho maxaa yeelay waxay leedahay cimri gaaban oo looga takhalusay nus-nolosha. Had iyo jeer xasuuso inaad ku dhejiso tilmaamaha qiyaasta daawada ee uu dhaqtarkaagu ku siiyo. Xitaa haddii aad qaadatid qiyaasta ugu hooseysa ama ugu sareysa, nolosha nuskeed ee daroogada ayaa wali isku mid ah.
Sida dawooyinka kale ee suuqa maanta, Pregabalin sidoo kale waxay kuu gudbin kartaa waxyeelo daran hadii aad ka badato. Aqlabiyadda ee Waxyeelooyinka pregabalin Waxay u sabab yihiin si xun u isticmaalka ama mararka qaarkood marka nidaamka jirkaagu si xun ula falgalo daawada. Taasi waa sababta ay had iyo jeer kugula talineyso in lagu bilaabo qaddar yar, oo markaa lagu hagaajin karo daawadaada kadib la socoshada sida jirkaagu uga jawaabayo daawada. Qaar ka mid ah waxyeelooyinka ugu caansan Pregabalin waxaa ka mid ah;
Akhbaarta wanaagsan ayaa ah in dhamaan waxyeeladaan daawada Pregabalin la xakameyn karo hadii aad ogeysiiso dhaqtarkaaga waqti inkasta oo xaaladaha qaar ay waayi doonaan waqti markii aad la kulanto saameynta sareysa ee aan kor ku soo sheegnay ha sii wadin qaadashada qiyaasta daawo la'aan. Dhakhtarkaagu wuxuu go'aansan karaa inuu joojiyo qiyaasta daawada haddii xaaladdu tahay mid aan la xakamayn karin ama kuu soo jeedin karo mid kale, oo ah badbaado kaamil ah adiga.
Si fudud ayaad u fududeyn kartaa ka iibsan budada Pregabalin inta badan ama ku filan wareegga qiyaastaada dukaamada kala duwan ee internetka ama farmasiga kuugu dhow maadaama ay sharci ka tahay qaybo badan oo adduunka ah. Dhakhtarkaaga ayaa waliba noqon doona qofka saxda ah ee ku tusi doona meesha laga gato. Tan ayaa kuu fududaynaysa inaad iibsato oo aad isticmaasho dawada adigoon ka baqayn inaad sharciga khilaafto.
Markaad eegto dib-u-eegisyo kala duwan oo Pregabalin ah, way iska cadahay in isticmaaleyaal badani ay ku qanacsan yihiin natiijooyinka ay helaan ka dib markay qaateen daroogada. Pregabalin waxaa badanaa loo isticmaalaa daawo xanuun joojisa, waxayna ka heshay jawaab celin fiican inta badan isticmaaleyaasha. Baarayaasha caafimaadku waxay kaloo soo gudbiyeen natiijooyin kaladuwan, waana sababtaas sababta FDA u oggolaatay in loo isticmaalo daweynta cudurka 'Epilepsy', 'post-herpetic neuralgia' ama xannuuno dhaca ka dib xinjirooyinka, xanuunka macaanka ee xanuunka dareemaha iyo Fibromyalgia.
Adduunku waa isbedelayaa, maantana, waad awood kartaa iibso budada Pregabalin khadka tooska ah ee kombuyuutarradayada oo qiimo jaban lagu heli karo. Websaydhkeenu waa mid saaxibtinimo leh, oo kuu fududaynaysa inaad u kala wareejiso hal badeeco kale isla markaana aad amarkaaga ku samayso ilbidhiqsiyo gudahood. Waxaad ka gali kartaa websaydhkaaga taleefankaaga gacanta, kiniiniga, ama xitaa laptop-kaaga. Intaas oo dhan, waxaan sameynaa alaabooyin daafaha adduunka ah iyo waqtiga ugu gaaban ee suurtagalka ah. Waxaad ka iibsan kartaa Pregabalin fara badan ama xitaa ku filan wareegga qiyaastaada.
Waxaan nahay hormuudka shirkada Pregabalin ee gobolka, qiimaheena aan awoodi karno kuma xadgudbayaan tayada alaabadayada. Waxaan ku bixinaa noocyo kala duwan oo ah alaabooyin caafimaad oo tayo sare leh dukaankeena internetka. Si kastaba ha noqotee, waxaan had iyo jeer kula talinaa macaamiisheenna oo dhan inay hubiyaan inay marayaan baaritaan caafimaad kahor intaysan bilaabin qaadashada alaabadayada. Alaabtayada caafimaadku waxay u horseedi karaan waxyeelo marka si khaldan loo isticmaalo ama si xad dhaaf ah loo isticmaalo. Pregabalin iib ah Waxaa sidoo kale laga heli karaa farmasiga kuugu dhaw laakiin hubi inaad ka hesho iibiyaha la isku halleyn karo. Maaha dhammaan dukaamada internetka ama dukaamada jir dhiska ay bixiyaan badeecado tayo leh.
Si kastaba ha noqotee, Pregabalin (148553-50-8) looma oggolaanin daaweynta walaaca ee Mareykanka, in kasta oo ay jiraan warar sheegaya in adeegsadayaasha qaarkood u adeegsadaan calaamad-si ay u xakameeyaan xaaladda. Qeybaha kale ee adduunka sida Yurub, Pregabalin waxaa loo aqbalay daaweynta walwal ka dhex jirta dadka waaweyn. Waxa kale oo jira warbixino aan la xaqiijin oo sheegaya in Pregabalin loo isticmaali karo in lagu xakameeyo niyad-jabka. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Pregabalin, la xiriir dhakhtarkaaga ama la tasho farmashiistahaaga.
Kim, SC, Landon, JE, & Solomon, DH (2013). Astaamaha caafimaad iyo adeegsiga dawooyinka ee bukaannada fibromyalgia ee dhawaanta loo qoray amitriptyline, duloxetine, gabapentin, ama pregabalin. Daryeelka arthritis-ka & cilmi baarista, 65(11), 1813-1819.
Goodman, CW, & Brett, AS (2017). Gabapentin iyo pregabalin oo xanuun ah - waa la sii kordhayaa iyada oo la sii sheegayo sababta walaac looga qabo ?. New England Journal of Medicine, 377(5), 411-414.
Lam, DM, Choi, SW, Wong, SS, Irwin, MG, & Cheung, CW (2015). Waxqabadka Pregabalin ee xanuun daran ee umusha ka dib marka loo eego qaybaha qalliinka ee kaladuwan: falanqaynta-meta. Medicine, 94(46).
Baldwin, DS, Ajel, K., Masdrakis, VG, Nowak, M., & Rafiq, R. (2013). Pregabalin oo loogu talagalay daweynta jahwareerka guud ee jira: cusboonaysiin. Cudurka maskaxda iyo daaweynta, 9, 883.